Tareenka Eurasia 2016 70 10 oo ka socda Diyaarinta Dalka si loo keeno kun qof oo soo booqanaya | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulEurasia Rail 2016 70 10 Waxay diyaarineysaa in lagu soo bandhigo Kumanaan Booqdayaasha
22 / 01 / 2016 34 Istanbul, tareenka, hawlaha, GUUD, TURKEY
Eurasia Rail 2016 70 10 oo dalka ka socota ayaa isu diyaarineysa inay kumanaan soo booqdayaasha isugu keento: 3 - 5 Eurasia Rail ayaa lagu qaban doonaa Xarunta Expo ee Istanbul bisha Maarso 2016; 30 waxay martigelin doontaa shirkada kaqeybqaadata 300 ee wadanka ka socota iyo 70 oo ka socota kun kun 10 wadan.
Tek Gobolka kaliya ee Eurasia, oo ah midka ugu weyn adduunka ee 3. Eurasia Rail, oo ah carwada tareenka; oo leh shirar isku mar ah iyo aqoon isweydaarsiyo, waxay kuu keeni doontaa booqdayaasha magacyada hormuudka ka ah duurka.
nidaaminta carwooyinka ganacsiga taasoo keentay in shirkadaha Turkiga ee hogaaminaya IT industry ee Turkey, halkaas oo kooxda waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa TF Fairs iyo Idiris - E International Trade Fairs 3 - 5 2016 ee March 6. Wadada Tareenka Caalamiga ah, Nidaamka Tareenka Laydhka ah, Kaabayaasha dhaqaalaha iyo Saadka Saadka - Eurasia Rail ayaa la qaban doonaa. Isku soo wada duuboo badeecada, adeegyada iyo teknolojiyada soo saareyaasha caalamiga ah iyo alaab-qeybiyeyaasha adduunka oo dhan, carwadan ayaa martigelin doonta 70 kun oo soo booqdayaal ah oo ka socda dalka 10 oo ah goob ganacsi oo hufan halkaas oo xirfadlayaasha tareenka iyo tareenka fudud ay isugu yimaadaan Gobolka Eurasia. Eurasia Rail 2016, oo u oggolaaneysa booqdayaasha xirfadleyda ah inay la kulmaan kooxda warshadaha waxayna siisaa fursad ay ku raacdo hal-abuurka si dhow; waxay abuuri doontaa madal muhiim ah oo lagu wadaago aqoonta waaxda iyo khibradda shirka iyo barnaamijyada seminar ee lagu abaabulay gudaha.
Agaasimaha Kooxda Gaadiidka & Saadka ee Turkiga Moris Revah: “2016. mar waaxda tareenka, waxaan abaabuli doonnaa madal ganacsiyeedka ugu weyn Gobolka Eurasian. Kooxda ITE waxay leedahay khibrad gaar ah oo waaxeed khaas ah oo ku saabsan duulista gaadiidka fuar iyo logistics saysinde iyagoo uga mahadcelinaya carwada cadaalada ee 6 oo laga soo abaabulay wadanka 14. IT Turkey la Eurasia Rail Fair ah oo leh khibrad Turkey iyo Eurasia. Isku-darka khibradda ITE ee Turkiga iyo faylalka ay wadaagaan iyo shabakadda caalamiga ah ee adag ee ay bixiso shirkadda ITE Group, carwadeena Eurasia Rail waxay sii wadi doontaa inay abuurto isku xirnaan xoog leh qaybta. Iminka heerka deganaanshaha aagga cadaaladdu wuxuu gaadhay boqolkiiba 23. Waxaan ku faraxsanahay inaan martigelino kooxaha warshadaha iyo 85 kun oo booqdeyaal xirfadlayaal ah oo ka socda dalalka 70 ee Eurasia Rail. ”
Revah: “2016, waxaan yeelan doonnaa barnaamijyo shirar iyo aqoon isweydaarsi siman oo cadaalad ah. Ajandaha Kalfadhiga Furan Wadada Wadnaha, Dhibaatooyinka Nidaamka Tareenka Magaalada, Sharciga Tareenka / Liberalization, Horumarinta Gawaarida Tareenka, Hababka Maareynta Badbaadada, Mawduucyada Gaarka ah ee tareenka, iyo barnaamijyada shirarka iyo aqoon-isweydaarsiga ayaa abuuri doona aag heer sare ah oo lagu wadaagayo aqoonta waaxda iyo khibradda.
3 - 5 Maarso Carwada ayaa lagu qaban doonaa 2016, Germany, Czech Republic, Italy iyo France, kuwaas oo leh wadooyinka tareenka ugu horumarsan ee Yurub, iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha oo leh khadadka tareenka ugu dheereeya adduunka. Intaa waxaa dheer, Iiraan, oo noqotay mid ka mid ah suuqyada bartilmaameedsiga adduunka ka dib qaadista cunaqabateynta, iyo Xiriirka Ruushka, oo ah dalka labaad ee leh shabakadda tareenka ugu dheer adduunka, ayaa ka qeybgali doona carwadda.
Jamhuuriyadda Turkiga Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, Waddooyinka Tareenka ee Waddanka Turkiga, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ iyo TÜLOMSAŞ waxay ka qeyb qaadanayeen soo bandhigayaal ilaa sanadka ugu horreeya ee carwadan. Tareenka Eurasia; KOSGEB sidoo kale waxaa taageera hay'adahan.
2015 bishii Marso 5. Xawaaraha "Eurasia Rail Fair" waxay keentay alaabada 26 ee ka socota wadamada 274 oo ay weheliso booqdayaasha 68 ee ka kala yimid wadamo kala duwan. Shirka ayaa si isku mid ah loogu qabtay carwada; wakiilo ka socda qaybaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo aqoonyahannada. Shirka oo soo jiitay dareen weyn, mowduucyo ay ka mid yihiin "Horumarinta Wadooyinka Tareenka Dunida", "Teknolojiyada Gawaarida Tareenka Sare" iyo Fursadaha Fursadaha Iskaashiga Gobolka ee Kaabayaasha dhaqaalaha ele.
ITE Koonfur Afrika
Tiknoolajiyada Awooda Sare ee Tareenka